Ogaden News Agency (ONA) – Kooxda TPLF oo Mudo Gaaban Gashay Kulankoodii 3aad.
Kooxda TPLF oo Mudo Gaaban Gashay Kulankoodii 3aad.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Maqale ee xarunta Gobolka Tigrey ayaa sheegaya in uu kooxda TPLF ufurmay shir dag dag ah oo sida lasheegay ay doonayeen in ay kuxiliyaan mid kamid ah dhibaatooyinka kooxda lasoo daristay.
Sida xogta aan kuhelayno kooxda ayaa kulankan doonaysay in ay kubuuxiyaan boosaskii ay ragii hayay xilkii kaga qaadeen shirkii qiimaynta ay ugu magac dareen ee dhawaan kusoo gabagaboobay magaalada Maqale oo ah goobta ay kooxdu kucalaacasho.
Kooxda ayaa kulankoodii hore xilkii kaga xayuubiyay madaxwayne kusheegii Gobolka Tigrey Abay Woldu, waxaana lasheegayaa in ay hada booskaas umagacaabeen ninka lagu magacaabo Debresion Gabre Makael oo ah gudoomiyihii cusbaa ee kooxda TPLF, kaas oo labo todobaad kahor xilkaas loodhiibay.
Sidoo kale waxaa kulankan lagu caydhiyay labo gudoomiye Gobol oo sida lasheegay lagu eedeeyay wax qabad la’aan iyo xilgudasho waa, dhinaca kale waxaa madax xafiiseed lagu qoray nin ay walaalo yihiin Getachew Asafa oo ah madaxa sirdoonka wayaanaha.
Kulanka ay gashay kooxda TPLF ayaa lagu macneeyay mid qaar kamid ah garabyada kooxdu ay ku farxeen halka qaar kalana ay aad uga xumaadeen waxa meesha kasocda iyo qaabka wax loomaamulay.
Arimahan isku qasan ayaa muujinaya kala aragti duwanaanta kooxda TPLF iyo isminja xaabinta kooxda dhexdeeda ah, waxaana lasheegayaa in kulankasta oo ladoonayo in wax lagu xaliyo uu wax siikala fogeeyo.